Armenian Church Yangon - Yangon Thu Michelle Video
Places and landmarks, Video Jun 29, 2018
ဒီချာ့ခ်ကျောင်းက စစ်ဖြစ်တုန်းက ဗုံးဒဏ်ခံရလို့ အမိုးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတယ်။ တန်းတွေပဲကျန်တယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီရှေ့မှာရှိတဲ့ မြေကွက်လပ်လေးက အရင်က ဘုန်းတော်ကြီး (သင်းအုပ်ဆရာပဲ ခေါ်မလား) နေတဲ့အဆောင်ရှိတယ်။ စစ်ဖြစ်လို့ အကုန်ပြောင် …. လှေကားထစ်ပဲကျန်တယ်။ အာမေးနီးယမ်းချာ့ချ်လို့ ဘာကြောင့်ခေါ်လဲဆိုတော့ အာမေးနီးယားနိုင်ငံက အာမေးနီးယားလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံကို အခြေချဝင်ရောက်နေထိုင်ရင်း တည်ဆောက်ခဲ့လို့ပါ။ ချာ့ချ်နာမည်က St. John The Baptist ပါ။ Yangon Heritage Trust ရဲ့ မြို့ပြအမွေအနှစ်စာရင်းဝင်အဆောက်အအုံတွေထဲက တစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာကို အရင်ကအမြဲဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေ့တယ်။ အခုလောက်မသန့်ရှင်း မသပ်ရပ်သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲတဲ့နှစ်ကမှ နိုင်ငံခြားသားမိတ်ဆွေကို လိုက်ပို့ရင်း အဝေးကြီးမသွားချင်တာနဲ့ ကြံရာမရလို့ အဲ့ဒီနေရာဝင်ရင်းမှ ရောက်ဖူးတယ်။ အစောင့်ရှိတယ်။ ဒီအတိုင်းဝင်သွားရုံပဲ။ တံခါးပိတ်ထားတယ်။ သော့မခတ်ထားဘူး။ အထဲဝင်လိုက်ရင် အာမေးနီးယမ်းဘုရားဝတ်ပြုသံ မတိုးမကျယ်ဖွင့်ထားတယ်။ ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ မီရှဲအတွက် လုံးဝမတူတဲ့ ခံစားမှုကိုပေးတယ်။
အဲ့ဒီတော့ ကြုံရင် သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါဦးလို့ ……….
Produced By IDEA LIVE
Oriental Orthodox Christianity is represented in Burma byachurch of the Armenian Orthodox Church, although reports of inscriptions in Greek dating back to the 13th century may indicate an earlier (now extinct) Orthodox presence in what is now Myanmar. You can find more information about the church and activities by the following link provided.
You could count the congregation at the Armenian Church of St John the Baptist, Yangon’s oldest place of Christian worship, on one hand. I’vealot of experiences by making those videos in this program. I live around in this area but I really don’t know about Armenian and quite interesting and surprise for me.
Let me create more videos about Yangon’s interesting places and leave your comments below if you want to know more about the video.